किंग साइज होटल कढ़ाई लक्जरी फैक्टरी बिस्तर बेड डुवेट कभर सेट-केसी 51१ / / १1832२, चीन किंग साइज होटल कढ़ाई लक्जरी फैक्टरी बिस्तर बेड डुवेट कभर सेट-केसी 51१ / १1832२ निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना - कोसमोस होम टेक्सटाइल कं, लिमिटेड।
कम्फर्टर र डुवेट कभर
बेडस्प्रेडहरू र रजाईहरू
सजावटी र तकियाहरू थ्रो गर्नुहोस्
कम्फर्टरहरू र डुवेट सम्मिलित गर्नुहोस्
कम्बल र थ्रो
200TC कपास - विवरण
तपाईंको वर्तमान स्थिति: होम>उत्पादन>कम्फर्टर र डुवेट कभर>200TC कपास
किंग साइज होटल कढ़ाई लक्जरी कारखाना बिस्तर बेड डुवेट कभर सेट-KC51 / 1832
कपास: ठीक, चिल्लो र नरम कपासको उच्च गुणस्तरको कपडा, एक सास फेर्न साटन बुनेको साथ, सक्रिय रye्ग, राम्रो रंग रेन्डरिंग, टिकाऊ, राम्रो न्यानो राख्ने, चार मौसमका लागि यसलाई आदर्श बनाउँदछ।
(१) डुवेट कभर + समतल पाना + बेडस्प्रेड + पिलोकेस + कुशन
(२) डुवेट कभर + पाइलोकेस
()) बेडस्प्रेड + तकिया
()) तपाईको आवश्यकता अनुसार मिलाउन सकिन्छ
प्रमाणीकरण: Oeko- टेक्स प्रमाणित
कपडा: १००% कपास, पोलिक सूती, माइक्रोफाइबर (तपाइँको अनुरोधको रूपमा)
प्याट्रेन: ठोस रंग, प्याचवर्क, कढ़ाई
आकार आयाम: अनुकूलन
इलेजेन्ट प्रिन्टहरू ， सक्रिय र fabrics्गका कपडाहरू र एम्ब्रोइडरिंगको साथ, हाम्रो संग्रहले सबैभन्दा नयाँ रूप र दृश्य प्रभाव प्रदान गर्दछ।
नयाँ शैली र चीनमा सर्वश्रेष्ठ टेक्सटाइल कारीगरहरू द्वारा शानदार शिल्पकारीको साथ बनाईएको।
शुद्ध र इको-फ्रेन्डली
ओइको-टेक्स् प्रमाणित र हरियो वातावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा ， नरम छाला।
यसको नरम गुणवत्ता, नाजुक, सास फेर्न मन पराउनु भएको, हाम्रो सबै ओछ्यान सबै सबै उच्च गुणस्तरका कपडाहरूले बुनेको छ।
वस्तु नाम: किंग साइज होटल कढ़ाई लक्जरी फैक्टरी बेडिंग बेड डुवेट कभर सेट -cc51 / 1832
सामाग्री: 200TC कपास
अन्य प्रकारका सामग्रीहरू उपलब्ध छन्।
आकार विशिष्टता पूर्ण: १PC डुवेट कभर: x 1x76 "" २PC पिलोशाम: २०x86 "
क्विन: १PC डुवेट कभर: x 1x86 "" + २PC पिलोवशाम: २०x86 "
(टुक्रा र आकारहरू हुन् वैकल्पिक।)
प्याकेज: एकल तह पीवीसी ब्याग + घुसाउनुहोस् कार्ड, कार्डबोर्डको साथ आन्तरिक, स्ट्यान्डर्ड एक्सपोर्ट कार्टनको साथ बाहिरी
यो हुन सक्छ का लागि अनुकूलित सुपर मार्केट, थोक, उपहार पसल र अन्य धेरै बिक्री च्यानलहरू।
MOQ: प्रति रंग १ 150० सेट्स
मात्रा लोड गर्दै 1x40HQ: 9000Sets; १x1HQ: 20 3700०० सेट्स
भुक्तानी: T / T %०% निक्षेप, %०% B / L प्रतिलिपिको नजरमा, L / C
वितरण समय: 60०% जम्मा भएको 30० दिन पछि
ढुवानीको पोर्ट: शंघाई (मुख्य), शेन्जेन, निing्गो र चीनको कुनै पोर्ट
Q: तपाईको कारखाना कहाँ छ?
A: हाम्रो कारखाना हो स्थित न्यानटong्ग शहर, जिian्सु प्रान्त, चीनमा। शंघाईबाट दुई घण्टाको दुरी।
Q: के तपाइँ अनुकूलन उत्पादनहरू आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ?
हो: हो। हामी OEM अर्डरमा काम गर्दछौं, यसको मतलब आकार, सामग्री, मात्रा, डिजाइन, लोगो, प्याकिंग आदि अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
Q: म बिभिन्न रंगहरू म कसरी अर्डर गर्न सक्छु?
A: तपाइँ प्यानटोन र inमा सबै डिजाइनहरू मनपराउने रंगहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र materials्ग रye्गाउने वा प्रिन्ट गर्ने बिभिन्न सामग्रीहरूको बिभिन्न अनुरोध छ। विवरणका लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
प्रश्न: कसरी तपाईं उत्पादन गुणवत्ता ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हामीसँग हाम्रो उत्पादन प्रकृयामा १ears वर्षको अनुभव र कडाइका साथ गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणालीको साथ QC टीम छ। तेस्रो भाग निरीक्षण स्वीकार्य छ।
Q: तपाईंको वितरण समय कति हो?
A: सामान्यतया -०-30० दिन पछि हामीले अर्डरलाई पुष्टि गर्‍यौं, तर यो अर्डरको मात्रा र मा आधारित भएर सम्झौता गर्न सकिन्छ उत्पादन तालिका।
Q: के म एक नमूना लिन सक्छु र कसरी?
A: हामी निःशुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्छौं र international-5 दिन भित्र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस मार्फत बाहिर पठाउन सक्छौं।
Q: यदि मैले उद्धरण प्राप्त गर्न चाहान्छु भने मैले के जानकारी प्रदान गर्नु पर्छ?
A: आकार, सामग्री, भरने (यदि छ भने), प्याकेज, मात्रा कृपया हामीलाई जाँच्नको लागि डिजाइनको केही तस्बिरहरू पठाउनुहोस् यदि सम्भव छ भने.
Q: कुन कपडा तपाईं प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ?
उत्तर: हामी प्राय: माइक्रोफाईबर, पोलीकटन आपूर्ति गर्दछौं,100% कपास,टेंन्सेल, ज्याक्वर्ड, चेनिल र बाँस।
Q: तपाइँको MOQ के हो?
A: ग्राहकको छापिएको डिजाइनको लागि प्रति डिजाइन .०० सेट। .० सेटहरू हाम्रो स्टक गरिएको मुद्रित डिजाइनहरूका लागि प्रति डिजाइन। ग्राहकड ठोस रंगको लागि प्रति रंग se००सेटहरू। हाम्रो स्टक रंगको लागि प्रति र per रंग सेट।
प्रश्न: तपाइँसँग कती कढ़ाई लेस डिजाइनहरू छन्?
A: हामीसँग कम्तिमा फीताका लागि १००० भन्दा बढी बिभिन्न डिजाइनहरू छन्।
Q: के तपाइँ कुनै मेलामा भाग लिनुहुन्छ?
A: हो, हामी प्रत्येक वर्ष क्यान्टन फेयर र फ्रान्कफर्ट हेमटेक्स्टिल फेयरमा सम्मिलित भयौं।
प्रश्न: के तपाईं अलीबाबाको सदस्य हुनुहुन्छ?
A: हो, हामी २०० since देखि अलीबाबाको सुनौलो आपूर्तिकर्ता भएका छौं।
Q: यदि म तपाईंको कम्पनी भ्रमण गर्न आउँछु, तपाईं निम्तो पत्र पठाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
A: निश्चित रूपमा, मलाई राहदानीको प्रतिलिपि मात्र पठाउनुहोस्।
१००% कपास सतीन प्याचवर्क ठोस र Color्ग लिनेन शीट होटल बेड कम्फर्टर सेट- KC100 / १49०
बेडिंग लिनन १००% कपास होटल नयाँ डिजाइन कढ़ाई डिजाइन बेड डुवेट कभर सेट-KC100 / १48
अनौंठो डिजाइन सफ्ट कपडा धुने कपास युरोपियन बेड डुवेट कभर सेट-Kc53
KOSMOS मेल को लागी गाउँदै
Qi'An औद्योगिक, Tongzhou जिल्ला, Nantong शहर, चीन।
प्रतिलिपि अधिकार - KOSMOS होम टेक्सटाइल कं, लिमिटेड। Meeall द्वारा समर्थन।